Soomaaliya iyo Kenya oo dardar gelinaya dib-u-celinta qaxootiga doonaya in ay Soomaaliya ku laabtaan-SAWIRRO – Radio Muqdisho
Soomaaliya iyo Kenya oo dardar gelinaya dib-u-celinta qaxootiga doonaya in ay Soomaaliya ku laabtaan-SAWIRRO
Bidix: Danjiraha Kenya ee Soomaaliya, Madaxa UNHCR Flippo Grandi, Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed, Wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye iyo Danjiraha Soomaaliya ee Kenya Jamaal Maxame Xasan/ Sawir qaade Xasan Baafo
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta ku heshiiyay qorshe lagu daradar galinayo dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed eek u jira xerada Dhabaab, ayadoo loo marayo heshiiska saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dowladood iyo hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Shir ay maanta ku yeesheen magaallada Nairobi Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye, dhiggiisa Kenya Aamina Maxamed iyo madaxa UNHCR Filippo Grandi, ayaa laga soo saaray war-murtiyeed lagu sheegay in dhammaadka sanadkan 2016-ka la qorsheeyay in Soomaaliya lagu celiyo boqol iyo konton kun oo qof oo Soomaali ah, ayadoo la raacayo heshiiska saddex geesoodka ah.
“Dhinacyadu waxa ay qeexeen in hoos loo dhigo tirada qaxootiga ah ee ku jirta Dhadhaab 150,000 oo qof dhammaadka sanadka 2016-ka, ayadoo loo marayo dib-u-ceinta dadka doonaya, dib u dejinta qaxootiga aan Soomaalida ahayn iyo diiwaan gelinta dadka Keenyaatiga ah ee isu diiwaan geliyay qaxooti ahaan” ayaa lagu yiri War-Murtiyeedka.
Shantii sano ee la soo dhaafay boqol kun oo qaxooti Soomaaliyeed ah ayaa iskood ugu laabtay Soomaaliya, Heshiiska saddex geesoodka ah intuu shaqeynayay 16 kun oo qof ayaa ku laabtay Soomaaliya. UNHCR ayaa sheegtay in dhammaadka bishii May ee sanadkan ay tirada qaxootiga ah ee ku nool Dhadhaab ay hoos u dhacday ayna gaartay 326,000 oo qof.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdsalaan Cumar Hadliye oo saxaafadda kula hadlayay Nairobo isagoo ay garab taagan yihiin dhiggiisa Kenya iyo madaxa UNHCR ayaa yiri “ Dadka waxaa loo celinayaa si doorashadooda ah oo waafaqsan heshiiska saddex-geesoodka ah iyo xeerarka caalamiga ah. Bishaan kaliya waxaa laabay in ka badan kun qof, waxaa saf ku jira oo diyaar u ah in ay laabtaan labaatan kun oo qof, dadkaani ayaga ayaa dooranaya in ay laabtaan”. Wuxuu intaa ku daray in dadkaani ay dalkooda ku heli doonaan nolol wanaagsan.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Aamina Maxamed ayaa sheegtay in labada dowladood iyo Qaramda Midoobay ay iska kaashanayaan in dadka ku jira xeryaha Dhadhaab dalkooda lagu celiyo, ayadoo la dhowrayo sharciyada caalamiga ah iyo heshiisyada u dhaxeeya dhinacyada.
Madaxa UNHCR Filippo Grandi, ayaa sheegay in taageerada la siiyo dadka dib ugu laabanaya dalkooda la badinayo isla markaana la xoojinayo arrimaha farsamo ee ay u baahan yihiin, taas oo keeni doona in dad badan ay ku laabtaan muddo gaaaban. Wuxuu intaa ku daray in qorshahaani u baahan yahay in deeq bixiyayaashu ay taageeraan, si uu u fulo.
Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxaa ku nool boqollaal kun oo isugu jira Soomaali, Kenyaati iyo dad ka soo qaxay koofurta Suudaan. Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay in ay doonayso in ay xerto xeryahaan. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday dhawaan ayaa u sheegay qaxootiga in aan qasab lagu celin doonin laakin ay muhiim tahay in ay waddankooda ku laabtaan, si ay uga qeyb qaataan dib u dhiska dalka isla markaana u sameystaan nolol wanaagsan.
SAWIR QAADE: Xassan Cumar Baafo
Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday Hoteelka Naasahablood Kow
Ciidamada Amniga oo soo afmeeray weerarkii Hotelka